request: presentation software — MYSTERY ZILLION
request: presentation software
September 2008 edited September 2008 in DTP
လက်ရှိတွင် presentation များကို powerpoint 2007 ဖြင့် ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ powerpoint ဖြင့် ပြုလုပ်ရသော presentation များကို ရိုးအီလာသောကြောင့် သုံးရတာ လွယ်ကူပြီး အမြင်တွေ လန်းစေမည့် presentation software တစ်ခုလောက် စမ်းသုံးကြည့်ချင်ပါသည်။ (ခပ်လန်းလန်း presentation တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်အတွက်). full version ရရှိနိုင်မယ့်နေရာလေးပါ လမ်းညွှန်စေချင်ပါသည်။
flash သုံးကြည့်ပါလားဗျ ...
အံမယ် ပါ၀ါပွိုင့်များ အထင်သေးလို့ ရိုးအီတယ်ဘဲရှိသေး
SWiSHMAX စမ်းကြည့်ပါလား.... flash ထက်တော့ လွယ်မယ်ထင်တယ်... ကျနော်တော့စမ်းဖူးဘူး... ဟီး....
presentation ဆော့၀ဲတွေအများကြီးဘဲ။ အားလုံးလိုလိုကတော့ ၀ယ်ရမှာတွေပါ။
ဖရီးရတဲ့ google presentation သုံးကြည့်ပါလား။ gmail ရှိရင် သုံးလို့ရတယ်။
သူ့သခင်က ရသွားပလား။ မရသေးဘူးလား မသိဘူး။
လန်းလန်းလေး လိုချင်တယ်ဆို ဒါကိုသုံးကြည့်။ take tour ပြီး နမူနာကြည့်လိုက်ပေါ့။ လန်းသွားမယ့်အပြင် ကြော်ငြာတွေထဲကလို လန်းဆန်းမောပြေ ဘီယာရည်ဖြစ်သွားမယ်။ ဟီးဟီး။
ဖရီးမရလို့ ခရက်တွေဘာတွေလိုရင် ကိုအိတ်ဇိုက်တာကို သွားဒုက္ခပေး။ သူက ဒီအတွက် အသက်ရှင်နေတာတဲ့။
ဒီလင့်ကတော့ တော့တန်း တွေကို ကွန်ပဲယားလုပ်ထားတာ။ ဟီးဟီး။ ထိပ်ဆုံးဆယ်မျိုးကို နှိုင်းယှဉ်ထားတာ။ စိတ်မဆိုနဲ့နော်။ ဇူးလူးလည်း ယင်းကလိကျွမ်းပါတယ်ဆိုတာ ကြုံလို့ကြွားတာ။
ဆီးယူ (see you)
ဖမ လို ဘာသာပြန်ရရင်တော့ တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ တဲ့
ရော့ဗျာ ကျွန်တော် PERSPECTOR ဆိုတဲ့ presentation software လေးကို ဒေါင်းပေးထားပါတယ်။ ကိုဇူးလူး topten List ထဲမှာသူက ၈ မှာရှိပါတယ်။ fullversion လေးနော်...သူ့ မူရင်းစျေးက ၂၉၉ ဒေါ်လာတောင်နော်... :d
DOWNLOAD PERSPECTOR PROFESSIONAL
ကို exiter, Please enterapassword to access this file: တဲ့။
ဘာလို down ရမှာလဲ???
ပက်၀က်က 123456abc ပါ။ :d
PowerPoint သုံးတာ မရိုးရအောင် template လေးတွေပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား
PRESPECTOR တော့ ရသွားပီ..ဟိဟိ. (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
တလက်စတည်း http://www.sliderocket.com/ (SLIDE ROCKET) လေးလဲ လုပ်ပေးဦးပါအုံး.